Talyaaniga oo xusay sanad guuradii 1-aad ee ka soo wareegatay Buundadii duntay ee Genoa
Mogadishu - 21:53:51
Wednesday August 14, 2019 - 22:00:36 in Wararka by Super Admin
Maanta oo Arbaco ah waxaa sanad laga joogaa Buundadii Morandi ee magaallada Genoa, taas oo duntay iyadoo ay gaadiid dusheeda marayaan, waxaana ku geeriyooday 43 qof.
Xuska sanad guurada 1-aad ayaa waxaa ka soo qayb galay Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella, Ra’iisul Wasaare Guiseppe Conte, duqa magaallada Genoa Marco Bucci, ehellada dadkii ku geeriyooday shilkaasi naxdinta leh iyo dad fara badan.
Buundadaasi ayaa la dhisay 1967-kii, waana mid ka mid ah buundooyinka ugu qadiimisan Talyaaniga iyadoo sababihii ay u burburtay lagu eedeeyay dayactir la’aan.
Booliska Talyaaniga ayaa baaritaan ku sameeyay shirkadaha Atlanta ee qaabilsan dhismaha buundooyinka ee mataanaha la ah shirkadda dhismaha ku qaadatay qandaraaska jidadka Talyaaniga (Autostrade per l’Italia), hase yeeshee shirkaddan ayaa ku andacootay in intii u dhexeysay 2015-2018 ay howlaha dayactirka buundada ku bixisay 9 milyan oo Euro.
Dhanka kale buundada Genoa oo gebi ahaanba la dumiyay bishii June ayaa mar kale bisha April 2020 dib loo dhisi doonaa iyadoo markan uu buundadan cusub uu naqshadeeda sameynayo Injineerka weyn ee Renzo Piano, kaas oo dhisay goobo caalami ah oo caalamka ah sida Centre Geores Pompidou ee Paris, The Shard (London) iyo Whitney Museum (New York).